people Nepal » अर्थले िकन रोक्यो जनप्रतिनिधिको तलब ? अर्थले िकन रोक्यो जनप्रतिनिधिको तलब ? – people Nepal
अर्थले िकन रोक्यो जनप्रतिनिधिको तलब ?
काठमाण्डौ,२६ जेठ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएको छ। जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी प्रस्ताव अर्थले रोकेसँगै नवनिर्वाचित प्रतिनिधिको तलब सुविधा अन्योलमा परेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले तत्कालका लागि तलब सुविधाको प्रस्ताव रोकिएको बताए। ती अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ३५/३६ हजार जनप्रतिनिधि लोकसेवा आयोगले जागिरका लागि खुलाएजस्तो गरी उनीहरूको तलब सुविधा तोकेकाले त्यसमा अर्थ मन्त्रालयको राय नमिलेको हुँदा रोकिएको समेत बताए। यो खबर हामीले आजको राजधानी दैनिकबाट लिएका हौ।
भत्ता दिन सकिने कुरो अर्को हो, तर जागिरेजस्तै गरेर तलब दिन सकिने विषयमा अर्थको फरक राय भएकाले तत्काललाई सहमति दिन सकिएन – अर्थ मन्त्रालय
स्थानीय तहका कार्यकारी पदाधिकारीले पूर्णकालीन भएर काम गर्नुपर्ने भएकाले तलबको आवश्यकता औंल्याउँदै स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आउने पदाधिकारीको तलब भत्ता र सञ्चालन खर्चबापत अर्थ मन्त्रालयसँग १४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मागेको थियो। अर्थले स्थानीयको उक्त मस्यौदालाई अस्वीकार गर्दै रोकिदिएको हो।